Waa imisa lacagta lagu abaalmarinayo Xulka Fransiiska ee ku guuleystay Koobka Adduunka? – Xeernews24
Waa imisa lacagta lagu abaalmarinayo Xulka Fransiiska ee ku guuleystay Koobka Adduunka?
17. Juli 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Xulka dalka Faransiiska oo ku guulaystay Koobka Adduunka ayaa la guddoonsinayaa abaal marintii ugu sarraysay, sida uu shaaca ka qaaday madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
Taagerayaal badan ayaa isu soo baxay garoonka diyaaradaha magaalada Paris ee Paris’ Charles de Gaulle si ay usoo dhaweeyaan xulka Faransiiska.
Xulkii faransiiska ee ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa waxay jeebka ku ridan doonaan 29 milyan ginni.
Xulka kaalinta labaad galay ee Croatia ayaa waxay heli doonaan iyana 21 milyan ginni, halka Belgium 2-0 kaga badisay England kaalinta 3aadna gashay ay qaadanayaan 18 milyan oo ginni halka xulka ingiriiska oo kaalinta 4aad cariirsaday lagu abaalmariyay 16.5 milyan ginni.
Wadar ahaan lacagta abaalmarin ee lagu bixinayo Koobka Adduunka waa 320 milyan ginni, waana lacag ay xaqiijisay FIFA bishii October ee sannadkii 2017.
Xul kasta oo ka mid ah 32da xul ee ka qeybgalay Koobka Adduunka waxa ay abaalmarin ahaan u heli doonaan 1.2 milyan ginni madaama ay koobka u soo baxeen.
Afarta xul ee lagu soo reebay wareega sideed dhamaadka waxa ay heli doonaan 12.1 milyan ginni midkiiba, halka sideeda kooxood ee lagu soo reebay wareega 16ka ay heli doonaan midkiiba 9 milyan ginni oo dheeri ah.
16kii kooxood ee ku haray wareega group-yada sida Poland, Germany iyo Masar waxa uu midkiiba heli doonaa 6 milyan ginni.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/07/France-squads-match-schedule-fifa-2018.png 400 600 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-07-17 09:24:472018-07-17 09:31:54Waa imisa lacagta lagu abaalmarinayo Xulka Fransiiska ee ku guuleystay Koobka Adduunka?
Xaflad balaadhan oo loo qabtay Isayas looguna magac daray Ethiopians &... Dhegeyso R/Wasaaraha Itoobiya Dr Aby oo si Cadho dheh uga hadlay Xasuuqa ay...